အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ဦးခေါင်းခွံ Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ဦးခေါင်းခွံ Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo ဇူလိုင်လ 14, 2016
ဦးခေါင်းခွံတက်တူးလုပ်နိုင်တဲ့များအသုံးပြုမှုကိုယ်စားလှယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတော်များများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်သေဆုံးမှုနှင့်သေခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မတိုင်မီအချို့သောသုတေသနလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ခေါင်းခွံ၏ဒီဇိုင်းများကိုလည်းမကြာခဏမက္ကဆီကန်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်သကြားလုံးဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးဟုခေါ်ဝေါ်သောနာမည်ကျော်သကြား #skull တက်တူးထိုးကဲ့သို့မိမိတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အဆိုပါမက္ကဆီကိုကြောင့်ထိုသို့ပြုနေရာသောအခန်းကဏ္ဍများသေတက်တူးထိုးများ၏ Day ကိုကိုချစ်ဥပမာကိုယူပါ။
အဆိုပါအမျိုးသမီးများသည်မကြာခဏလူများ #tattoo တွေ့မြင်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များသည်လည်းအလွန် feep သောလမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အရောင်များကိုသုံးပါ။
1 ။ ခြေထောက်အပေါ်ယောက်ျားလေးများအဘို့အနေကြာဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ခေါင်းခွံကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်သာမန်အမှုအရာအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်ဒါပေမယ့်တက်တူးမှကြွလာသောအခါ, ခေါင်းခွံကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးထင်သောအရာကိုအနေဖြင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လာကြပါပြီ။ တစ်ခုခုမှအရေးပါမှုတစ်ခုကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်တချို့ကမှင်ဦးခေါင်းခွံ။
2 ။ ယောက်ျားတွေအဘို့လက်အေးဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူးတွင်
3 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့အလက်စုံလင်သောစိတ်ကူးပေါ် cool ဦးခေါင်းခွံတက်တူး
သင်သည်သင်၏တက်တူးဒီဇိုင်း၏ဗိသုကာဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းပူနွေးလာသည်တဲ့တက်တူးကိုဆည်းပူးကြပါပြီတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အတွေးကိုယ်စားပြု၌သင်တို့၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားခဲ့ကြသောအခါ, အနုပညာရှင်တစ်ဦးရရှိရန်သင်၏တာဝန်
4 ။ လူတို့သညျအဘို့အဦးခေါင်းခွံကိုလက်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
လူတို့သညျမိမိတို့အအလောင်းတွေပေါ်တက်တူး imprinting သူသာသူမြားခဲ့ကြသည်အချိန်ရှိခဲ့သည်။
5 ။ ယောက်ျားတွေအဘို့ပခုံးဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
6 ။ နောက်ကျောမိန်းမတို့အပေါ်ကို Creative ဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်း
7 ။ အရွက်များနှင့်လက်တော်သည်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
လူတွေဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးန်းကျင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုဖန်တီးအဆိုပါလမ်းက ပို. ပင်နှစ်သက်ဖွယ်စေသည်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
8 ။ လူတို့သညျပခုံးပေါ်မှာအပြာရောင်ပန်းပွင့်နှင့်အတူဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
9 ။ လူတို့သညျအဘို့အဝက်လက်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူး
ဤသည်တက်တူးထိုး #design ဤနေရာတွင်ခြွင်းချက်ကြည့်ရှုနိုငျသညျ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဿုံဒီကိုယ်စားပြုမညျ့သူအနုပညာရှင်တစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
10 ။ ယောက်ျားပေါင်များအတွက်ဂီတရော့ခ်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူး
11 ။ ယောက်ျားလေးများများအတွက်ဝက်လက်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကူးဖို့ပခုံး
12 ။ အေးမြသောဦးခေါင်းခွံတက်တူးနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဒီဇိုင်းလက်ဝဲဘက်
ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဤအပိုငျးအပျေါမှာရှိသောအခါ, prettier ရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ သင်ပြုသင့်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်တဲ့အနုပညာရှင်ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်
13 ။ လူတို့သညျပခုံးများအတွက်ပျံသန်းနေသောလိပ်ပြာဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
တစ်ဦးဦးခေါင်းခွံပုံစံဒီဇိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်အမှန်တကယ်သင်တဦးတည်းမသုံးနိုင်ခင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကသူတို့ကိုဖြစ်ချင်သောလမ်းသည်နှင့်အညီသင့်ရဲ့ဦးခေါင်းခွံပုံစံဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
14 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့အ Biceps ဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူး
သငျသညျမသိလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့အမှုအရာတွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအာဏာကိုခွန်အားနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သေခြင်းတရားသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားအနီးအတှေ့အကွုံရှိရမည်သောသူတို့အဘို့, သူတို့ကမကြာခဏသူတို့ရဲ့ phobias ကျော်လွှားဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
15 ။ ယောက်ျားတွေများအတွက်ဝက်လက်ဖန်တီးမှုဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူးဖို့ပခုံး
တချို့လူတွေကမကြာခဏသူတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုသင်္ကေတကကိုအသုံးပြုပါ။ သူကတောင်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
16 ။ လက်တော်သည်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
တစ်ခါတစ်ရံဦးခေါင်းခွံတက်တူးကိုလည်းအောင်ပွဲ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသတိပေးသော်လည်းနှင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါကဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားသို့ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကပင်ပိုဣတ္စေနိုင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
17 ။ လူတို့သညျအဘို့အဝက်လက်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူးဖို့ပခုံး
အဆိုပါမင်းသမီးသို့မဟုတ်အေးမြတစ်ခုခုလိုပေမည်သောသူတို့အဘို့, ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းခွံအလတ်စားအရွယ်အစားရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျသေးငယ်တဲ့ဦးခေါင်းခွံရှိခြင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သင်ဦးခေါင်းခွံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့အသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်လက်မ, ခြေကျင်းသို့မဟုတ်လက်မောင်းပင်အခြမ်းအပေါ်လုပျနိုငျတစ်ခုခုပါပဲ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
18 ။ အမြိုးသမီးမြားအဘို့အရောင်စုံဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးအေးမြဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
အဆိုပါဦးခေါင်းခွံတက်တူးပင်ကသှေးဆောငျစေရန်အရောင်များနှင့်အတူလှပသောနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကြီးမားတဲ့ဖက်ရှင်ကြေညာချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကျောကြီးတွေကစွန့်ခွာလျှင်သင်အနည်းငယ်ရဲရနိုင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
19 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့အပြည့်အဝကိုပြန်အံ့သြဖွယ်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးစိတ်ကူး
ခေါင်းခွံ၏အသုံးပြုမှုကိုတောင်မင်းသမီးကွောကျစရာကောငျးသူမြား၏အသုံးချနေဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထိုအခေါင်းခွံလွန်သွားပြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒီဇိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသူတစ်ဦးချင်းစီပေါ်မူတည်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
20 ။ အနီရောင်မိန်းကလေးတွေပေါင်တစ်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာနှင့်အတူမြင့်တက်
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တစ်ဦးဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှလွဲ. အသုံးပြုသူမှအများကြီးမဆိုလိုပေ။ သင်ကထူးခြားသောကြည့်ရှုနှင့်ကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသတင်းစကားပေးစေရန်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးဖို့တခြားဒီဇိုင်းများထည့်နိုင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
21 ။ ထိုလူရဲ့ပခုံးအဘို့အဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
22 ။ မိန်းကလေးပေါင်ပေါ်ကို Creative နှင့်အံ့သြဖွယ်ဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်း
23 ။ မိန်းကလေးများအဘို့နားဦးခေါင်းခွံတက်တူးဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာရဲ့နောက်ကွယ်မှာ
သင်ပင်တစ်ခုလုံးကိုသင်ပြန်ပေါ်သူတို့ကိုဆွဲသည့်အခါဤအသတ္တဝါများ sexy ဖြစ်ဖို့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ပင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကြီးမားတဲ့ဦးခေါင်းခွံတက်တူးထိုးရတဲ့ဖြင့်သင့်ပုံရိပ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
24 ။ cool ပခုံး, လူဦးခေါင်းခွံတက်တူးမင်စိတ်ကူး
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးတက်တူးအနုပညာရှင်ရှိတဲ့အခါသင့်ရဲ့အလုပ်တစ်ဝက်ကိုပြုနှင့်တက်တူးညာနဲ့ပိုကောင်းရေးဆွဲနေသည်သောအခါ, အလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
အမြိုးသမီးမြားအတှကျ Next ကို 12 ဦးခေါင်းခွံ Tattoos
လက်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosလက်တက်တူးနှလုံး Tattoosနေရောင်တက်တူးမျက်စိတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးmehndi ဒီဇိုင်းဟင်္တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးဂီတတက်တူးကြောင်တက်တူးတက်တူးထလိပ်ပြာတက်တူးစိန်တက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးဆင်တက်တူးမြှားတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးKoi ငါးတက်တူးအစ်မတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးခြေလျင်တက်တူးလတက်တူးFeather Tattooလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးပန်းချီတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးငှက်တက်တူးခြေကျင်း Tattoosrip တက်တူးစုံတွဲတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးချစ်စရာတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူး